Hotspot cuqaasamuu danda'an Fakkaattileetti Ida'uu
BarruuyyaaFakkaatiin akka ati URL bakkeewwan murtaa'an, hotspots jedhamani fakkii galmee ke irraatti milteessitu siif eeyyamu.Barruuyyaan fakkaattii gurmuu hotspots tokko yookiin isaa oliiti.
Gosoota hotspots sadii fakkaasuu ni dandeessa: rektaangiloota, luulloota, fi rogaddeewwan. Yommuu hotspot cuqaastu, URL iin foddaa iyyaafataa yookiin goodayyaa ati ifteessitee ni banama. Barruu isa yommuu hantuuteen ke hotspot irra boqottu mul'atus ifteesssuu ni dandeessa.
Hotspot cuqaasamuu danda'u fakkaattileetti ida'uuf
Qaree bakka galmee ke keessaa BarruuyyaaFakkaatii barbaaddu qubachiisi.
Fakkiicha filatameen, Gulaali - BarruuyyaaFakkaatii fili.Gulaalaa BarruuyyaaFakkaatii, isa fakkicha duubbeetti agarsiisu ilaalta.
Boca hotspot fakkaasuuf sajoowwan Gulaalaa BarruuyyaaFakkaatii keessaa fayyadami, fakkeenyaaf rektaangilii, fakkaattii duubbee irraa.
URL "Teessoo" kan yommuu fayyadamaan hotspot cuqaasu iyyaafataa saphaphuu keessatti agarsiifamu galchi.
Dirqalaan, "Barruu" isa yommuu fayyadamaan hantuutee gara hotspot tti akeeku akka qajeelfamaatti agarsiifamu galchi.
Jijjiiramoota kee fayyadamuuf qabduu Fayyadami cuqaasiiti, Gulaalaa BarruuyyaaFakkaatii cufi.
Galmicha LibreOffice keessa yookiin or dhangii HTML tiin olkaa'I.
BarruuyyaaFakkaatii akka faayiliitti olkeessee faayilii sana, fakkeenyaaf, gara kaadimaa Saphaaphuutti ol fe'uu ni dandeessa.
Title is: Hotspot cuqaasamuu danda'an Fakkaattileetti Ida'uu